Date My Pet » 4 Mahery fahazarana Of Happy Fifandraisana
Efa naka ny fotoana handinika momba ny fomba fitondran-tena ny fomba fiantraikany ny fitiavanao ny fiainana ho tsara kokoa, na ho amin'ny ratsy? Misy zavatra azonao atao olana misy ankehitriny fa ny fifandraisanareo fiantraikany hanao zavatra tsara,, toy ny misy fahazarana izay lasa karazana toetra faharoa ho anareo, fa mitondra fiara ny mpiara-miasa voanjo. Raha ny voalohany dia ny hiaro, mety hanaovanao hatao hiala amin'ny faharoa karazana fahazarana sy fomba fanao mampiasa ny sasany ihany no hahomby ny fifandraisana sambatra hivadika ho fahazarana.
1. Mitondra ny mpiara-miasa amin'ny fanajana
Ny fanajana dia misy fifandraisana ingredient dia tokony hanana, na isika miresaka momba ny sekoly ambony fling, iray mijanona indray alina na ny fitenenana mahazatra hoe mampiaraka. Mitondra ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fanajana lasa zava-dehibe indrindra, rehefa lehibe ao fifandraisana, indrindra fa raha te hampiakatra azy ho androm-piainany ny fanambadiana maharitra. Manaja mitovy ny fanehoana fitiavana, toy ny tsy mandray ny mpiara-miasa amin'ny fanajana raha ny marina dia midika hoe maneho ny tsy fankasitrahana, ny tsy fahampiam-pitokiana na fanekena.
Mpiara-miombon'antoka momba ny mampiseho azy ireo dia midika hoe tianao izy ireo noho ny hoe iza izy ireo. Mety hanana fomba fijery samy hafa momba ny fiainana, saingy tsy midika izany fa manana zo tsy hanaja azy / azy. Izany no zavatra tokony hotadidintsika, indrindra rehefa tsy mitovy hevitra ianareo roa amin'ny zavatra. Ady, na dia tsy manan-danja indrindra ireo, dia ny fotoana matetika mpivady izy ireo raha ny marina hanadino ny ekipa ary tokony hitondra tena toy izany.
2. Mandeha an-tongotra akaiky
Fahazarana io dia tsy misy fiantraikany lehibe eo amin'ny toe-po, eo amin'ny fahasalamana sy ny fifandraisanareo amin'ny. Dia ny fahafahana hahazo ny manao fanatanjahan-aloha na aorian'ny andro mipetrapetraka amin'ny birao sy ny fahafahana mandany fotoana tsara ny sasany ho toy ny mpivady. Mandeha akaiky mampirisika ihany koa ny resaka mahafinaritra tahaka ny ny fotoana hahomby ny hanapaka amin'ny raharaha isan'andro sy mazava ny lohany miara-.
3. Mandany ny hariva miaraka lavitra ny TV
Mijery TV mba ho iray amin'ny malaza indrindra (raha tsy ny tena ny rehetra) vao nanam-potoana asa, nefa azo antoka fa tsy hanampy anao ho toy ny mpivady. Raha ny marina ny TV mitaona ny saina rehetra, manao toy ny fifandraisana stopper. Ahoana no mety mifandray amin'ny tsirairay teo am-pijerena TV? Ahoana ny nitodika nidina ny TV (amin'ny kely indrindra ombieny ombieny), ary mandany fotoana tsara ny sasany ho toy ny mpivady? Afaka miresaka momba ny andro, afaka snuggle ny sofa, Tsarovy ny andro voalohany, na manaova drafitra arahina vakansy manaraka. Mifantoka amin'ny zavatra izay aminareo roa mandeha.
4. Manao tsara fihetsika noho ny mpiara-miasa
Ahoana ny fitondrana ny kafe ny vadinao eo amin'ny maraina? Na niantso ny reniny ny fomba fahandro sy ny fandrahoan-tsakafo ny toerana tena mbola kely lovia? Ahoana ny mividy ny olon-tiany ny toerana tena mofo? Na dia tsara kokoa, fanaova izany ho azy? Tsy voatery ho zavatra lehibe. Fihetsika kely maneho tsara ny fahatsapana fitiavana sy ny fanajana. Miala ao an-tsoratra ny hafa na mandefa SMS ny hoe malahelo azy ianao / izy indray mandeha amin'ny fahazarana kosa dia izay mety hisy fiantraikany eo amin'ny fomba tsara ny fifandraisanareo.